राजेश विद्रोही | Ratopati
दलित मुद्दामा विदेशी लगानी किन ? access_timeअसार १८, २०७८
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुवर्गीय मुलुक हो । तर यहाँ लामो समयदेखि मुठीभर अभिजात वर्गको हातमा शासनसत्ता खुम्चिँदै आएको छ । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई हरेक हिसाबले बिजनेस कम्प्लेक्सका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसको सब...
किन जन्मिन्छन् रूपा सुनारहरू ? access_timeअसार १३, २०७८
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा रूपा सुनार निकै चर्चामा छिन् । जातका कारण कोठा भाडामा बस्न नपाएपछि उनी एकाएक चर्चामा छिन् । कतिसम्म भने उनले घरपेटीमाथि मुद्दासमेत चलाइन् । तर, आरोपीलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छुटाए । यसले कस्ता मानिसहरूको हातमा राज्यको बागडोर पर्दै ...
जातमा के छ ? access_timeअसार १०, २०७८
उनी केही दिनसम्म राम्रै लागेकी थिइन् सबथोक चलेको थियो आमा–छोरीझैँ सम्बन्ध थियो सुन्दर– सुन्दर र हिस्स परेकी रूपा रङ्ग रूपमा पनि हजारौँमा एक थिइन् तर जब जातको सवाल अगाडि आयो त्यसपछि सारा सुन्दरता पानी पानी भयो उसको सुन्दर बोली र व्यवहार...
राजनीतिक दलको यस्तो नौटङ्की किन ? access_timeबैशाख १५, २०७८
यतिबेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था पूरै नाटकीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो नाटक देशको रक्षाका लागि हो कि अरू कसैको स्वार्थ रक्षाका लागि हो भन्ने कुरा खोतल्ने समय आएको छ । यतिबेलाको राजनीतिक गतिविधिले आम जनमानसमा राजनीतिप्रति अति घृणा पैदा गरिदिएको छ । यो...
मुलुकले खोजेको माओवादी राजनीति access_timeचैत ८, २०७७
यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको छ । राजनीतिक सङ्कटसँगै राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेर गएको छ । राजनीतिक दल भने यो खेलको गोटी बनेका छन् । यो मुलुकको कुनै नवीन समस्या होइन । पुरातन समस्या नै हो । मुलुकले यो समस्याबाट पटक पटक निकास खोजे पनि सम...
स्रष्टा र सिर्जनामाथि म्युजिक नेपालको दृष्टिकोण access_timeफागुन १९, २०७७
यतिबेला मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । नेपालको नयाँ संविधानले मुलुकभित्र रहेका हरेक वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको भेषभूषा, भाषा र मातृत्व संस्कृतिलाई राष्ट्रियताको मान्यता दिएको छ । तर लामो समयदेखि जसरी एकल र नश्लीय भेषभूषा, भाषा र संस्कृतले राष्ट्र...
निर्णायक आन्दोलन र ओली पतनको यात्रा access_timeमाघ १३, २०७७
यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश कदमविरुद्ध राजनीतिक माहोल तातेको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) लगायत राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवा चरणबद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू एकै स्वरमा...
अबको बाटो : आन्दोलन या ताजा जनादेश access_timeपुस ६, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका छन् । उनले चालेको राष्ट्रघाती कदमविरुद्ध काँग्रेस, जसपा लगायतका राजनीतिक दल, वर्ग, क्षेत्र र समुदाय हिजोदेखि नै विरोधमा उर्लिएका छन् । कतिसम्म भने उनकै पार्टी र नेताकार्यकर्ता सडकमा कालो पट्टी बाँधेर नारा लाउँदै छ...
किन दुख्दैन दलितलाई दलितकै पीडा ? access_timeअसोज २३, २०७७
कोरोना महामारीको समयमा संसारभर सन्देश जानेगरी हाम्रो मुलुकमा केही दुखद् घटना भएका छन् । जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, राणागाउँका नवराज विक आफ्ना प्रेमिका लिन १९ जना साथीहरूसँग रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती गाउँ पुग्दा नरसंहार भयो । नवर...
हिरासतमा मारिएका उनीहरु... access_timeअसोज १, २०७७
घटना १ कैलालीको धनगढी उपमहानगर पालिका–१ का १९ वर्षीय रोशन विक गत भदौ २२ गते चोरीको मुद्दामा पक्राउ परे । उनी हिरासतमै रहँदा भदौ २६ गते झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए । उनलाई हिरासतमै प्रहरीले हत्या गरी झुन्ड्याइएको परिवारको आरोप छ । पोस्टमार्टम...
बाबुरामको त्याग र मधेसप्रतिको दृष्टिकोण access_timeअसार २, २०७७
डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जादुको छडी देखेर यतिबेला धेरै मान्छे पागलझैँ बनेका छन् । उनलाई तथानाम गाली गर्दै हिँडेका छन् । जसको कुनै सीमा छैन । अहिले पनि मधेसीलाई पहाडी शासकहरुले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्दै छन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि त्यही नजरले...
मनकारी जोडी : जो गरिबको भोक मेट्न समर्पित छ access_timeजेठ ३०, २०७७
यतिबेला नोवेल कोरोना महामारीसँग मानव जाति संसारभर लडिरहेको छ । कोरोनाका कारण लाखौं मानिसले ज्यान गुमाई सकेका छन् । करोडौं मानिस संक्रमित छन् । मुलुकमा लकडाउन भएको झण्डै चारमहिना पुग्दैछ । यस अवधिमा कयौंको रोजीरोटीका माध्यम ठप्प भएका छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्न...
कोरोना सङ्कटमा सरकारको चरित्र access_timeजेठ १२, २०७७
मधेस लामो समयदेखि विभिन्न खाले उत्पीडनको शिकार हुँदै आएको छ । निहित सत्ता स्वार्थका लागि मधेसलाई पटक पटक जलाउने प्रयास भइरह्यो । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक सङ्कटमा परेपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन वैशाख ८ गते मधेस केन्द्रित दललाई फुटाउने अध्...
मधेस आन्दोलनले नेताको वर्ग मात्र फेरियो access_timeमाघ ५, २०७६
आज माघ पाँच अर्थात बलिदानी दिवस । आजकै दिन लहानमा रमेश महतोको सहादत भएको थियो । त्यसपछि सयौँ मधेसी सपुतहरुले आफ्नो प्राण आहुती दिएका थिए । आजको दिनलाई मधेस केन्द्रित दलले बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । मधेस आन्दोलनको १३ वर्ष पूरा भएको छ । तर मधेसी जन...
समाजवादभित्र दलित र सिल्पीको बहस access_timeकात्तिक २८, २०७६
दलित समुदाय इतिहासमा पटक पटक विभिन्न बहानामा अपमानित, अपहेलित र उपेक्षित हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि राजनीतिक बजारमा फेरि विगतमाझैँ दलित समुदायलाई अपमानित हुनेगरी नयाँ शब्दको खेती हुँदैछ । त्यसमा पनि हरेक हिसाबले युगौँदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएक...
‘लुट्न सके लुट...’ गीतबाट किन डगमगायो सरकार ? access_timeफागुन ७, २०७५
चर्चित लोक गायक पशुपति शर्माले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट’ गीतले अहिले नेपालको राजनीतिक बजारलाई तताइदिएको छ । मुलुकमा थुप्रै किसिमका गीत सङ्गीत छन् तर पशुपति शर्माले गाउँदै आएका सामाजिक यथार्थता र देश दुनियाँका लोकगीतले छुट्टै महत्त्व ब...
सङ्कटमा पूर्वलडाकुको जीवन access_timeपुस ७, २०७५
केही हप्ता अगाडि एकजना पूर्वलडाकुले सिंहदरबारमा विष सेवन गरेको घट्ना सार्वजनिक भयो । अहिले माइतीघर मण्डलामा माओवादी युद्धका घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू अनसनमा बसिरहेका छन् तर सरकार भने मौन छ । जीवन हत्केलामा राखेर गणतन्त्र स्थापनामा अग्रिम भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वलडाकुको...
समृद्धिका लागि सांस्कृतिक क्रान्ति access_timeकात्तिक २५, २०७५
मुलुकमा अहिलेसम्म भएका परिवर्तन शासकका लागि मात्र भयो, शोषित वर्गका लागि भएन । अहिले मुलुकमा समृद्धिको कुरा चर्को रूपमा उठिरहेको छ । तर समृद्धिको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार र कालोबजारी मौलाएको छ । जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता मुलुकको मौलि...
चक्कु बोकेर स्कुल जान्छिन् सुरक्षा access_timeकात्तिक १८, २०७५
आजभोलि सुरक्षा स्कुल जानै डराउँछिन् । स्कुल जान साहारा खोज्छिन् तर त्यो कुरा आमाबुबालाई थाहा छैन । ‘देशमा छोरीचेलीहरू सुरक्षित छैनन्, आमा । त्यसैले देश सुरक्षित छैन ।’ आइतबार काठमाडौँ जडीबुटीमा गीता तामाङकी ११ वर्षीया छोरी सुरक्षा गुरूङले आमालाई भन्दै थि...
‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ माथिको प्रश्न access_timeअसोज २३, २०७५
पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्या काण्डमा भान्से सानुकान्छा तामाङलाई अपराध कबुल गराउन प्रहरीले दिएको चरम यातनाको दृश्य पीडितले सार्वजनिक गरे । सानुकान्छा तामाङले क्षतिपूर्ति र सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाहीका लागि मानव अधिकार आयोगमा निवेदन पनि दिए । अहिलेसम्म सुनवाइ कहाँ...
लोकतन्त्रको उपहास access_timeअसोज १५, २०७५
इतिहासमै पहिलो पटक मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । सङ्घीय संरचना यतिबेला कार्यान्वयनको क्रममा छ । नयाँ र अनुभवको अभावका कारण पनि यसको कार्यान्वयनमा कतिपय अन्यौल र जटिलता अहिले पनि कायमै छ । कतिपय सवालमा अन्य देशको नक्कल गर्न खोज्दा झन् जटिलता थपिन खोजेजस्तो पनि द...
पहाडी राष्ट्रियतासँगै एकल जातीय मधेसी अधिनायकवादको खतरामा मधेस access_timeअसोज २, २०७५
लामो समयदेखि मधेसमा पहाडी उग्र राष्ट्रवादको द्वन्द्व छ । मधेस केन्द्रित दललाई यो विषय राम्रोसँग थाहा छ । तर यतिबेला मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ता स्वार्थको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेका छन् र मधेस राजनीतिलाई केपीओलीकै बाटोमा डोर्याइरहेका छन् । मधेस मुक्तिका लागि पटक पटकको आन्दोल...
सडकमै आमासँग खाना माग्दै जब बालक रुन थाले access_timeसाउन १५, २०७५
हालैको एक बिहान काम विशेषले राजधानीकाे सुन्धारा पुगेको थिएँ । हतारमा माइक्रोबाट ओर्लेर सडकपेटी हुँदै गन्तव्यतिर लाग्दै थिएँ । सडकपेटीमा एउटा दृश्य आँखामा ठोक्किन पुग्यो । त्यो दृश्य मोबाइलमा कैद गरेँ । एक आमाले आफ्नो अबोध बच्चालाई कुच्चिएको थोत्रो बटुको...
गोबरगाढाबासीको कष्टकर दैनिकी access_timeसाउन ६, २०७५
गोबरगाढाबासीको दैनिकी निकै कष्टकर छ । जानीजानी मृत्युलाई ढुकेर बस्नु कसलाई पो रहर हुन्छ र ? कतिबेला मृत्युले डाक्ने हो थाहा छैन । सारा बस्तीका मान्छे मृत्युलाई हत्केलामा राखेर जाग्राम बाँचिरहेका छन् । गाउँलेहरू भन्छन्– “जानीजानी मृत्यु रोज्नु ...
अरूण साहले किन पाएनन् आम माफी ? access_timeअसार ६, २०७५
अचेल सधैँ कारागाबाट एकजना सहयात्रीको फोन आउने गर्छ । सुखदुःखका कुराहरू सुनाउने गर्छन् । कुरा सुनिदिनुपर्ने र समस्या बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । वर्गीय एक सहयात्रीको नाताले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिनुपर्ने हुन्छ । उनी सधैँ एउटै उत्साहित कुरा गर्छन् । वर्ग सत्रुसँग कहिल्यै नझुक्नु...